Akwụsịla iwu mgbe ị na -aga Thailand: Ị nwere ike bụrụ onye nwụrụ anwụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Akwụsịla iwu mgbe ị na -aga Thailand: Ị nwere ike bụrụ onye nwụrụ anwụ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Akụkọ dị iche iche
A hụrụ onye a na -enyo enyo ka o ji akpa rọba kpuchie isi ya tupu e gbuo ya.
Ịga mba ọzọ nwere ike ịdị ize ndụ ma ọ bụrụ na ị daa iwu, ma eburu n'obi ma ọ bụ na mberede n'ihi amaghị. Na Thailand, ijide gị nwere ike ịpụta na onye a na -enyo enyo nwere ike gbuo ma ọ bụ pụọ n'anya.
Enwere mkpesa ọha na Thaialnd maka mgbanwe iji machibido ịta ahụhụ na mwepu nke ndị a na -enyo enyo.
Emebela iwu iwu abụọ n'ime afọ gara aga ma na -echere ugbu a na mgbakwunye na nzuko omeiwu.
Prime Minista amalitela mgbanwe ndị otu ndị uwe ojii site na ịtụgharị Iwu ndị uwe ojii.
Onye na-ekwuchitere ọfịs Prime Minister Thanakorn Wangboonkongchana gosiri na Prime Minista Gen Prayut Chan-o-cha kwetara nchegbu ọha na eze gbasara onye bụbu onye isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii Nakhon Sawan ma rụtụ aka na ọ malitelarị mgbanwe na nzukọ ndị uwe ojii site na ịtụgharị Iwu ndị uwe ojii. .
Ndị uwe ojii gburu ikpere n'olu na -enyo enyo kpatara ọnwụ.
Prime Minista ekwenyela na gọọmentị ya ga -aga n'ihu na -akwalite mgbanwe ndị uwe ojii na idepụta iwu megide iwu ịta ahụhụ na ịpụ n'anya nke ndị a na -enyo enyo, na -eso mkpesa ọha na -arị elu n'ihi ikpe ndị uwe ojii Colonel Thitisan Uttanapol.
Ndị uwe ojii Thai anọ, gụnyere Colonel Thitisan Uttanapol, ka ndị uwe ojii Royal Thai na Bangkok na -enyocha ugbu a mgbe vidiyo pụtara na ndị uwe ojii gbagburu onye a na -enyo enyo na mberede na mbọ siri ike ịchụpụ ya n'ime nde baht abụọ, ihe dị ka US $ 2.
Dabere na Kittiwittayanan na osote onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii Thai National Colonel Kissana Phathanacharoen, ndị ọrụ uwe ojii na-ajụ onye a na-enyo enyo dị afọ 24 na nwanyị ya na ya gbasara mmejọ ọgwụ ike yana ịnwe ihe karịrị 100,000 methamphetamine mbadamba mgbe ha abụọ kwetara ịkwụ 1 nde baht na ego ịpụnara mmadụ ihe ka ewepụta ya.
Esemokwu ahụ mere na Nakhon Sawan, ógbè dị n'akụkụ ugwu Bangkok, kawanyere njọ mgbe Col. Thitisan Uttanapol tinyere akpa rọba n'isi onye ahụ a na -enyo enyo iji mee ka ọ maa jijiji ịba okpukpu abụọ nke ego ahụ ka ọ bụrụ nde baht abụọ, na -egbu ya na mberede n'usoro. - niile egosiri na vidiyo ahụ. Mgbe ha gbusịrị ikpere n'olu onye a na -enyo enyo, ndị uwe ojii nwara ime ka onye ahụ ji CPR tụte onye ahụ ọ nweghị isi. Ndị ọrụ Thai achọpụtala na onye ahụ metụtara bụ Jeerapong Thanapat.
Colonel Thitisan Uttanapol, otu n'ime ndị ọrụ uwe ojii metụtara ihe a mere, amaara nke ọma na mpaghara ahụ, aha ya bụ "Jo Ferrari" n'ihi nchịkọta ụgbọ ala egwuregwu dị oke ọnụ. A na-ekwu na nchịkọta ya gụnyere Lamborghini nwere obere mbipụta Aventador LP 720-4 50th Anniversary Special, otu n'ime naanị otu narị n'ime ya ka emepụtara n'ụwa niile.
PM kwuru na usoro ikpe ziri ezi ga -agbarịrị ike, dị ka ogidi nchịkwa mba, ebe ọ na -ekwe nkwa na ndị uwe ojii dara iwu ga -enweta ntaramahụhụ.
Onye isi ala enyela ndị uwe ojii Royal Thai iwu ka ha mee mgbanwe ngwa ngwa asaa, gụnyere ọkwa ya, usoro nyocha yana usoro mmanye iwu, nghọta na nyocha na ọdịmma ndị uwe ojii.
N'ime usoro iwu abụọ edepụtara na nke ugbu a, PM kwuru na a na -aga n'ihu n'ihu n'ime afọ ndị gara aga ma na -echere ugbu a mgbakwunye na atụmatụ nzuko omeiwu. Onye na -ekwuchitere ụlọ Chuan Leekpai kwuru na Ọgọst 26 na etinyela okwu abụọ ahụ na ntụnye maka ịtụle.
Isi ihe a na -edepụta bụ usoro ntaramahụhụ maka mmekpa ahụ na ịpụ n'anya nke ndị a na -enyo enyo, mgbochi na nkwụghachi ụgwọ maka ndị ihe metụtara na usoro ịgba akwụkwọ maka ndị dara iwu.
Nke abụọ n'ime akwụkwọ abụọ a bụ Iwu ndị uwe ojii mba, nke na -echere ịgụ nke abụọ ya. Onye isi oche ndị otu gọọmentị Wirat Rattanaset, onye isi kọmitii nyocha nke akwụkwọ ahụ, kọwara taa na edemede ọ bụla nke akwụkwọ ahụ emeela ka a gbanwee, na -ebelata usoro a. Ka o sina dị, o kwuru na ọ bụrụ na ahụ na -eme nyocha ya ngwa ngwa, ọ nwere ike mezue ọrụ ahụ erughị otu afọ.